Car mkpọchi, suppliers, Auto akwụkwọ mmado, Ulo olu Ngwá Ọrụ - Locksmithobd
Ckslọ ọrụ Locksmithobd bụ ụlọ ọrụ shenzhen, edebanyere aha na China na adrees dị na District Shenzhen Longhua, Long Hua Road, Tianhui Building, C-512. Anyị bụ ụlọ ọrụ China nke nwere ọpụrụiche na ọkọnọ nke igodo ugbo ala na akụrụngwa mkpuchi. anyị bụ ndị nnọchi anya LISHI, GOSO, HONEST, KLOM.HUK. Anyị bụ ndị na ekesa ụwa ma ezi na Aftermarket ụgbọala remote na transponder igodo. Anyị anọwo na-enye ndị igodo ụgbọ ala maka ahịa moto na ndị mkpọchi maka afọ 5 gara aga ma na ime nke a, anyị wulitere mmekọrịta dị mma na ndị nrụpụta, ndị na-ere ahịa na ndị ọzọ na-ekesa ka ị nweta ọnụahịa kachasị mma na igodo gị.
KEYDIY ZB usoro ZB14-5 button eluigwe na ala ...
KEYDIY ZB usoro ZB14-4 button eluigwe na ala ...
KEYDIY ZB usoro ZB14-3 button eluigwe na ala ...
KEYDIY ZB usoro ZB12-4 button eluigwe na ala ...
KEYDIY ZB usoro ZB12-3 button eluigwe na ala ...
KEYDIY ZB usoro ZB11 button eluigwe na ala n'ime ime c ...
KEYDIY ZB usoro ZB10-5 button eluigwe na ala ...
KEYDIY ZB usoro ZB10-4 button eluigwe na ala ...
KEYDIY ZB usoro ZB10-3 button eluigwe na ala ...
KEYDIY ZB usoro ZB08-4 button global remote ...
KEYDIY ZB usoro ZB08-3 button global remote ...
KEYDIY ZB usoro ZB07-5 button global remote ...
Ọrụ oge: Anyị ga-aza gị n'ime awa 24 mgbe ị natara mkpesa gị na ụbọchị ọrụ anyị (Mọnde ruo Fraịde). Ihe niile: Ihe niile, ọ bụrụ na enwere ike ịlaghachi nsogbu nsogbu n'ime ụbọchị 7. Akwụkwọ ikike: Akwụkwọ ikike ngwaahịa afọ abụọ.
Ngwaahịa: thedị ihe mkpuchi mkpọchi niile na igodo Car isi, programmer, OBD ngwaọrụ. Oge Mbuga ozi: N'ime ụbọchị 3 nwere ike izipu. Ngwugwu: Nwere ike ịbụ OEM / ODM, Nwere ike iji ngwugwu logo nke gị.
Emeputa: Locksmithobd Factory dị na Zhejiang Province. Nwere ọfịs na Zhejiang na Shenzhen. Anyị na-ebupụkarị USA, Europe na Aisa. Nwee ọtụtụ ndị ahịa na ezigbo nzaghachi.
Anyị niile maara na igodo ụgbọ ala na-egwu igodo ...
Otu; Auto lockpick 9in1 ị ...
Na-eche ogologo oge T ...
Nwee uzo ndia ahia ahia di ...
1. Lelee ma nkwonkwo ahụ dị mma. Dur ...